अंग्रेजको ढिपी « Channel Np
मनोरञ्जन टिभी प्रवास पत्रिका स्वास्थ्य/जीवनशैली अन्तर्वार्ता अचम्म धर्म/दर्शन कृषि/प्रविधि ENGLISH अंग्रेजको ढिपी
प्रकाशित मिति : Saturday, January 7th, 2017 at 1:58 PM
यसमा ब्रिटिश सचिव अझ् ढिपी गर्दै जोड लाउथे, ‘होइन, तपाईंका सैनिकहरू तालीम लिन इण्डिया वा कुनै केन्द्रमा जानुपर्दैन, हाम्रा तालीमप्राप्त अफिसरहरू यहीं आएर तालीम दिनेछन्’ भन्दै।
श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेर र ब्रिटिश इण्डियाका परराष्ट्र सचिव कर्णेल हाल्याण्डबीच भएको संवाद:
श्री ३– तपाईहरूको जे जातको आया पनि मानिस पल्टनमा भर्ना गरिदिनु भयाको छ. लडाका जातबाहेक अरु राख्नाले पछि गोर्खाली पल्टनको नाममा दाग लाग्न जाला भंने संदेह लाग्छ. फेरि सार्की, कामी इत्यादि छोटा जातकालाई तपाईहरूले नोकरीमा लिई दिनाले दुनियांको व्यवहारै पनि चल्न कठिन हुन लागिरहेछ. मालताल पनि साह्रै महंगा हुन लागेको छ. यो लडाइले गर्दा मुलुकमा यतिको मानिस कम भइसकेको छ कि केही वर्षपछि तपाईहरूको २० गोर्खा व्याटालियनलाई पनि रिकुट पाउन कठिन हुन जानु केही वेर छैन. यांहा हाम्रो पल्टनलाई मानिस नपाइनाले अघिभन्दा तलब बढाई ९।१० रुपैया महिनावारी खाने गर्नु परीसक्यो. बाली खाने पुराना पल्टनमा मात्र बेसी तलब पर्ने हुनाले केही रिकुट पाईन्छन्. तपाई तलब बढ्ता दिनुहुन्छ रेल बाहातही सिवानासम्म आयकाले पाहाडका मानिसहरू थोरैलाई यांहा काठमाडौंमा आउनुभन्दा बृटिश मुलुकमा जानु सजिलो भै रहेछ. तेसैले पनि हामीलाई रिकुट मिल्न कठिन हुंदै आयाको हो
– हिमालखबरबाट साभार ।